Waaheen Media Group » Taariikhda burco iyo siyaasiyiinta ku suntan khadka cagaan “ green line” Amb Cawil, gudd Sulaiman, col: Maxamed Kaahin iyo marxuum Dhab-libaax
Browse:Home Articles Taariikhda burco iyo siyaasiyiinta ku suntan khadka cagaan “ green line” Amb Cawil, gudd Sulaiman, col: Maxamed Kaahin iyo marxuum Dhab-libaax
Published by Waaheen Media on June 18, 2017 | Comments Off on Taariikhda burco iyo siyaasiyiinta ku suntan khadka cagaan “ green line” Amb Cawil, gudd Sulaiman, col: Maxamed Kaahin iyo marxuum Dhab-libaax
Magaaladda Burco waxa ku nool boqolaal kun oo qof oo ka kooban dhamaan beelaha waawayn ee Reer Sheikh Isxaaq “HY HJ HA Arab “ iyo Gabooye. Sidaas ay tahay waxa la sheega khad cagaaran oo Burco u kala qaybiya Bari & Galbeed. Barigu waa HJ Galbeedkuna waa HY. Halkaa waxa lagu duudsiyay beelahii kale ee deggana Burco .Dadka qaar waxay yidhaahdaan khadka Cagaaran waxa alifay Saxaafadda Reer Galbeedka ee Jumhuuriya iyo Haatuf. Dadka qaarna waxay ku nisbeeyaan Siyaasiyiinta Reer Burco oo ay mid yaheen Amb Awil, Gudd Sulaymaan, Col Maxamed Kaahin iyo Marxuum Maxamed Ismaciil Bulaale “ Dhab libaax” .Qormadan hore waxaan si kooban usoo bandhigi doona taariikhda Burco.
Taariikhda Burco “ History of Burco “
Burco waxa si fiican loo degay dabayaaqadii qarnagii 18th magaceedana waxa la odhan jiray Ceel Gooni .Waxa wada deganaa beelaha Isaaq iyo Gabooyaha. Magaca cusub ee Burco waxa la bixiyay 1910 markii uu si rasmi ah u degay Ingriisku waxaana laga hogaamin jiray dagaalkii lagula jiray Daraawiishta . Guddoomiyahii “ Distrcit Commisioner” ugu horeeyay wuxuu ahaa Mr Allan Giib , oo ahaa sakaal joogay Somaliland muddo 19 sanodood ka badan. Wuxuu ka qayb galay dagaaladi Jidbaale, Daratoole iyo Taleex ee lagu jebiyay Sayid Maxamed Cabdalle Xassan . Mr. Allen Giib wuxuu cashuur kusoo rogay Gobolka Burco “ Head Tax” si loo dhiso skuulo . Waxa cashuurta si adag uga soo horjeestay dadkii deganaa Gobolka oo xoolo dhaqatada ahaa .
DILKII MR ALLEN GIIB
Bishii Febrauary 1922 waxa Burco yimid Badhasaabkii British Protectrate Mr Jeffery Archer waxaanu shir deg deg ah la qaatay Mr Allen Giib , Rasaldaar Major Xaaji Muuse Igare iyo Cuqaashi Reer Burco. Wuxuu amray inay Reer Burco si dhakhso ah u bixiyaan cashuurta xoolaha ‘ Head tax”. Waxa magaaladda ka qarxay buuq iyo mudaaharaadyo lagu diidanyahay cashuurta. Waxa dibedda u soo baxay Mr Allen Giib iyo Xaaji Muuse Igare. Dablay hubaysan oo Habar Yoonis ah ayaa toogtay Mr Allen Giib waxaanu ku dhintay goobtii taariikh 25th Feb 1922 . Koodii dilkaa gaysatay oo ahaa 5 qof way baxsadeen lamana qaban.
DUQAYNTII BURCO 1922 IYO FIRXADKII HY.
Markii dilka Allen Giib uu gaadhay Sir Winston Churchil oo ahaa Wasiir-Al -Mustacmaraadka Ingriiska wuxuu amray in Burco la ba’abiiyo qabiilkii dilka gaystayna ciqaab jamaaci ah “ collective punishment “ la saaro. Ciidamadii Cirka ee Ingriiska “ RAF” oo kasoo duulay Cadan kuna soo hakaday Berbera ayaa cirka ka weerary Burco 5th March 1922 , dhulkana waxa ka galay ciidmadii Camel Corps. Magaaladii Burco waxa kasoo hadhay Masjid Jaamac “ Mosque”. Qabiilki HY ee falka dilka GIIB gaystay waxa lagu xukumay 3,000 oo halaad .Waxay ka qaxeen dhamaan ceelashi ay biyaha ka cabi jireen ee Burco, Oodwayne, Ceel Xume , Ceeg iyo Cadaadlay. Waxa dhacdooyinkaas ka markhaati furaayaa tuducyadda soo socota oo uu tiriyay Abwaan Yowle. Markii dilka Giib loo sheegay wuxuu Yowle joogay Tififle oo ku dhaw Laas Anod . Yowle wuxuu watay geel fara badan oo gaadhaaya 300 halaad waxaanu kusoo jeeday Ceelka Burco. Asagoo dilkaas ka xun wuxuu tiriyay Gabay uu ku hal qabsaday hasheesii “ GO’OD”. Wuxuu yidhi :
Haday garan lahayd geiyga waxa ka dhacay, Go’od ma olosheene,
Gorgor duulaya iyo waa Dayuur , guuxa baxayaaye “ Aeroplane”
Niman goondhariina ku baxay , gacan islaameede
Giibtaasi uun bay hayaan , goor iyo ayaane
Godka la cadaabyow maxaa ,u geeyay Habar Yoonis
Gashigiisu badana ma anakaa , guunyaba u hayna.
Yowle wuxuu tix kale ku tilmaamay sida ay Habar Yoonis uga qaxday ceelashii iyo dhulkii ay degi jireen una yaceen hawdka sare. Wuxuu yidhi:
Ceel Xume iyo Oodwayne waa laga carceeraaye,
Kala carartay Habr Yoonistii calanku saarnaaye,
Cilmi Qabille waa kaa ka raray xalay Cadaadleeye,
Ciig kuma furaan Reer Xussein ama Caleen Wayne,
Xirsi Bari wuxuu ciirayaa cidhifka Doolloode,
Caynaanshahi wadhan fadhiyey Caado kor u dhaafye,
Cunimayso deegaan inuu Caarshe noolyahaye.
Qaxaas iyo firdakaasi wuxuu sababay in HY duulaan ku qaado Ogaadeen kana fogaadeen meel uu Ingriis ka dhawyahay.
(( La soco qormadda Labaad – Tariikhda New Burco 1924 )